Bafuna izimpendulo ngomgwaqo ongapheli | News24
Bafuna izimpendulo ngomgwaqo ongapheli
ISITHOMBE: LETHIWE MAKHANYAAmalunga omphakathi akhala ngokwakhiwa komgwaqo u-B2069 okungapheli.
UMPHAKATHI wasendaweni waseMbutshane uthi ufuna izimpendulo mayelana nokungapheli komgwaqo owakhiwayo u-B2069 okhona kule ndawo. Amalunga alomphakathi athi lo mgwaqo kwakuthiwe uzophela ngemuva kwezinyanga ezili-10 kodwa sekuphele unyaka ungapheli.
Lo mgwaqo uqale ukulungsiwa ngenyanga kaNdasa (March) ngonyaka owedlule. Amalunga alomphakathi athi afuna ukwazi ukuthi yini ebambezele ukuthi kuqedwe lo mgwaqo njengoba namanje kungabonakali ukuthi uyaphi.
“Lo mgwaqo ulinganiselwa ku-1km kuphela kodwa namanje awukakapheli asazi ukuthi yini into ebambile. Kumanje kwi-site sekusele ugeleja owodwa kuphela asazi ukuthi kwenzekani. Umgwaqo umbiwe inqaba yemigodi eyingozi yaqede yashiywa kanjalo.
“Sifuna ukwazi ukuthi kwenzekalani ngoba phela lomgwaqo mufishane kabi kanti futhi ukuthi kumele ufakwe itiyela nje kuphela akukho okutheni,” kusho elinye ilunga lomphakathi elingathandanga ukudalulwa.
Umphakathi uqhube wathi okubaphatha kabi kakhulu ukuthi akukho abatshelwa kona mayelana nokwenza ukuthi lo mgwaqo ungaqhubeki ukwakhiwa.
Lo mphakathi ususabise ngokuthi uma kungukuthi lomgwaqo awuqhubeki kuze kuphele inyanga kuzobe sekubaphoqa ukuba baye emgwaqeni.
Ikhansela lakule ndawo uMnu Sbusiso Mtshali uvumile ukuthi umgwaqo wawubekelwe izinyanga ezili-10. Uthe into ebambezelile ukuthi kube khona izinkinga ezibe khona ngesikhathi inkontileka isifikile sekumele iqale ukusebenza.
“Indaba yalo mgwaqo isuka kudala. Lona owakhiwa manje usuyisigaba sesithathu. Ngesikhathi kuqedwa isigaba sesibili umphakathi waphoqa ukuba kwenziwe nesigaba sesithathu kangangokuba kwaze kwaba khona isiteleka kwavalwa imigwaqo ngoba befuna kwakhiwe lo mgwaqo. Umasipala wabe usuphendula izikhalo zomphakathi waqoka inkontileka.
“Inkinga iqale ngesikhathi sekumele inkontileka iqale ukusebena kutholakale ukuthi kunezinye izinto ezingenziwanga ngendlela. Bebengakwazi ukuqala ukusebenza ngoba bekungazange kwenziwe ngisho ama-survey ngesikhathi beqokwa,” kubeka yena.
Uthe ngemuva kwalokhu kube sekubaphoqa ukuba baqale phansi balandela kahle uhlelo ngendlela efanele nokube sekwenza ukuthi kube khona ukubambezeleka kokusebenza.
“Bekusiphoqa ukuthi senze izinto negendlela besingeke sikwazi ukuthi sithi umsebenzi awuqhubeke ekubeni sibona ukuthi kunezinkinga ezikhona.
“Lezi zinkinga zidale ukuthi kube khona ukubambezeleka okuyizinyanga ezine.
“Inkontileka izoqala ukusebenza noma inini kusukela manje bese sizoba nomhlangano nomasipala ukuthola ukuthi kuzothatha isikhathi esingakanani ukuthi uqedwe lo mgwaqo,” kuphetha yena.